Indlela yokuqalisa iprojekthi ye-NFT okanye ye-DeFi ngaphandle kwezakhono zobugcisa - iProjekthi yoBumbano
Iprojekthi yoManyano iya kudibanisa abadali, abagqugquzeli kunye noosomashishini ukuze nabani na aqalise iprojekthi kwiBlockchain ngaphandle kokufunda ikhowudi.
NgoBumbano, nawuphi na umntu okanye iqela elincinci ngaphandle kwezakhono zobugcisa kunye nobuchule baya kukwazi ukuseka iphrojekthi yabo ye-NFT okanye ye-DeFi, okanye benze ithokheni yabo ye-crypto.
Unokuba ngasemva komqondiso olandelayo we-Shiba Inu (kutsha nje ugqithise i-Deutsche Bank nge-30 yeebhiliyoni zeedola ze-market cap), i-Safemoon, okanye ingqokelela ye-NFT - umntu okhuphisana naye kwi-Cryptopunks okanye kwi-Bored Apes.
Isebenza njani iProjekthi yoManyano
I-NFTs kunye neCryptos zilapha ukuhlala - akukho mathandabuzo malunga naloo nto, kunye neBitcoin yenza i-Bitcoin entsha kwixesha lonke kule veki isondela kwi-70,000 yeedola - kodwa namhlanje bambalwa abaphuhlisi abanobuchule abanokuqalisa iiprojekthi kwi-Blockchain, engafanelekanga. Umanyano luyayicombulula le nto.
Iprojekthi yoBumbano iqaliswe ngoosomashishini be-serial ukwenzela ukuzisa amathokheni angabonakaliyo (NFTs) kunye ne-decentralized finance (DeFi) kubantu abaninzi.
Umanyano liqonga elidibanisa amagcisa adibanisa amagcisa kunye noluntu lwawo kwaye lijolise ekunikeni umqondiso kuluntu lwe-intanethi kunye nomsebenzi wabadali, ukuzisa inkqubo yendalo yabo kwixesha ledijithali.
'Iithokheni zentlalo ziya kukhula zibe yi-trillion-dollar industry. Yeyona nto inkulu endakha ndayibona' –Reveal Vision’s Raoul Pal, owayesakuba ngumphathi we hedge fund eGoldman Sachs
Izigidi koosomashishini be-Intanethi kulindeleke ukuba bafudukele kwiBlockchain kutyalo-mali kunye namathuba onxibelelwano kwiminyaka ezayo nakumashumi eminyaka.
Abayi kufuna ukufunda ikhowudi - Injongo yoManyano kukusebenza njengeqonga 'leBlockchain njengenkonzo', ngendlela efanayo isoftware njengenkonzo (i-SAAS) yokuqalisa iguqule iWeb 2.0, kwaye yenze ibhulorho phakathi kweWeb 2.0 kunye IWebhu 3.0, ke nabani na unokuqalisa iprojekthi yakhe ngezakhono zokubhala ezikumgangatho ophezulu okanye ulwazi.
Ubumbano luya kudibanisa kwaye lusebenze kunye nezona ndawo zidumileyo zeendaba zoluntu, amashishini e-intanethi kunye neenkampani ezinkulu zobuchwepheshe kwi-crypto space.
Uninzi lwetekhnoloji efunekayo ukusungula iqonga loBumbano sele likhona, kunye nokuthengiswa kwabucala Umanyano NFTs kubatyali-mali bokuqala kuya kwenzeka ngoNovemba 15.
Thenga iiNFTs zeProjekthi yoBumbano
Ukuzibandakanya noManyano kwaye ube ngumamkeli kwangoko weprojekthi, ngoku ungafumana izandla zakho kwenye yee-NFTs zabo.
Ukuba neNFT yoManyano iya kukunika ukufikelela kwi-presale yangasese yethokheni yoBumbano kunye neenzuzo ezinenzuzo eninzi, kuquka amalungelo okuvota kunye nemivuzo kwiprojekthi.
Ukuthengiswa kwe-mint yangasese kucwangciswe ngoNovemba 15, kulandelwa ngokukhawuleza kwintengiso ye-mint yoluntu ngomhla we-19. Funda imephu yendlela epheleleyo, dibana neqela lophuhliso kwaye ujoyine iTelegram esemthethweni kunye noluntu lweDiscord kwiwebhusayithi yoManyano.